Waxool oo guul wayn ka gaartay Muqdisho United…(Gurxan oo dhaliyay gool u tartami kara goolka Sanadka ee horyaalka Soomaaliya) – Gool FM
Waxool oo guul wayn ka gaartay Muqdisho United…(Gurxan oo dhaliyay gool u tartami kara goolka Sanadka ee horyaalka Soomaaliya)
(Muqdisho) 27 Nof 2016. Naadiga Waxool ayaa guul soo laabasho leh ka gaartay kooxda Muqdisho United oo ay kaga adkaatay 3-1 kulan ka tirsanaa horyaalka Soomaaliya ee xilli ciyaareedka cusub.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineyso kooxda Muqdisho United.
Muqdisho ayaa ku gacan sarreysay qeybta hore ee ciyaarta oo marka laga soo tago goolka ay dhalisay waxay heshay fursado kale oo ay hogaanka ku dheereysan kartay, balse wax kasta waxay is badaleen qeybta dambe ee dheesha.
La tashiyo ay sameysay kooxda Waxool iyo canaan ay ku riday ciyaartoydeeda ayaa waxay dhashay in qeybtii labaad ay la soo bexaan miciyo libaax.
Kabtanka Waxool Cabdinaasir Gurxan ayaa goolka bar-baraha u dhaliyay kooxdiisa gool run ahaan u tartami kara goolka sanadka ee horyaalka Soomaaliya.
Gurxan ayaa dhowr ciyaartoy dhulka kaga tagay dabadeedna cag taraarax ah goosha ka dhigay xagasha hoose.
Ismaaciil Shiiqa oo badel ku soo galay ciyaarta ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Waxool kubbad u muuqatay offside balse la ansixiyay isagoo dhinac ka dhigay goolhayaha oo ay waji ka waji isaga hor yimaadeen.
Da’yarka farsamada badan ee Xasan CR7 oo isna badel ku soo galay dheesha ayaa goolka saddexaad u saxiixay Waxool kubbad qurux badneyd oo uu halka sare ka galiyay goolka.
Muqdisho United ayaa la oran karaa waxaa hoos u dhaca ugu wacnaa kaarka cas uu ka qaatay mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah qeybtii labaad ee ciyaarta.
Sikastaba Waxool oo la oran jiray Singjet ayaa gaartay guusheedii ugu horreysay xilli ciyaareedka cusub horyaalka Soomaaliya kaddib guul darro ka soo gaartay kulankeedii furitaanka.
Sawirro xul ah oo ku saabsan kulanka iyo waliba muuqaalka goolkii cajiibka ahaa ee Gurxan dib ayaan idin kaga soo gudbin doonaa insha’alaah.
Taageerayaasha Liverpool oo ka war sugaya tijaabada caafimaad ee berri lagu samaynayo Coutinho